KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Ganacsiga Muqdisho - Warbixin
Monday 14 January 2013 08:39
Ganacsiga Muqdisho - Warbixin
Muqdisho (KON) Ganacsiga magaalada Muqdisho ee caasimada Sooimaaliya ayaa sanadihii ugu danbeeyay waxaa ku yimid isbadal balaaran.
Markii la eego sadax sano ka hor sidii uu ahaa ganacsiga magaalada Muqdisho iyo hada isbadalka uu sameeyay ma ahan wax isku dhow ama leesku soo qaban karo.
Magaalada Muqdisho dhamaanteed oo soo gashay gacanta ciidamada dowlada Soomaaliya iyo degmooyinkii gobalka oo isku furmay ayaa keenay in ganacsigu gees ilaa iyo gees uu ku fido caasimada Soomaaliya.
Waxaa jira Ganacsato badan oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ka dib markii laga dareemay magaalada Isbadal iyo waliba suuqyo ku yaalay gobalada oo ku soo jabay magaalada Muqdisho.
Suuqyada Ganacsiga ee Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa ku yaala suuqyo waaweyn kuwaasi oo ay ku ganacsadaan ganacsatada Soomaaliyeed waxaana suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha uu ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho.
Suuqaan ayaa haatan ah mid sii fiday ka dib markii lagu daray qayo badan oo ganacsi, waxaa sidoo kale suuqaan soo dagay oo ganacsigoodii mar qura u soo weeciyay dhamaanba ganacsatadii ku ganacsan jiray suuqa ku yaala duleedka Muqdisho ee Ceelasha Biyaha.
Maamlka gobalka Banaadir oo kaalin weyn ka qaatay sugida amaanka suuqa Bakaaraha iyo dhidaamka ganacsiga suuqaasi ayaa ku dhiira galisay ganacsatada in ay hanti badan galiyaan suuqaan.
Sidoo kale waxaa jira suuqyo kale oo badan oo ku yaala magaalada waxaana ka mid ah Suuqa weyn ee loo yaqaano Suuq Bacaad, waxaaana suuqaasi uu xiligaan ka mid yahay suuqyada isbadalweyn sameeyay.
Maamulka gobalka Banaadir ayaa haatan diyaariyay suqii wynaa ee Bacadlaha ee Xamarweyne ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ka kooban ku dhowaan 1000-qof oo dhamaan tood ah qalal ganacsi, waxaana lagu wadaa in dhowaan madaxda dowlada Soomaaliya ay xariga ka jaraan suuqaan.
Ganacsiga dhulka xeeha ah ma ahan mid dadka Soomaaliyeed ay horay u yaqaaneen isla markaana ay wax badan ka fahan sanaayeen, laakiin nabada iyo xasiloonida xiligaan ka jirta Muqdisho, iyo waliba dadka qurbajoogta ah oo ku soo laabtay magaalada oo fahansan ganacsigaan ayaa keentay in loo soo geesto.
Xeebaha magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa ku yaala baarar waaweyne Hotelo iyo waliba meelo kale oo loogu talagalay in dadka isla socda ay kuwada sheekeestaan.
Xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ayaa ah meel mashquul badan saacad waliba aad tagto, waxaana halkaan ku yaala oo dhowaanahaanba laga dhisay Hotelo ay ku nastaan dadka dal xiiska u soo aada xeebta iyo sidoo kale ay dagi karaan.
Maalintii iyo habeenkii waa isku mid halkaan oo saacad walba dad ayaa imaanaya dad kale ayaana siibaya, inkastoo dadku ay u badanyihiin dadkii dhowaan ku soo laabtay wadanka ee qurba joogta ah.
Ganacsiga Gawaarida wuxuu ka midyahay ganacsiyada aadka u soo kobcay mudooyinkii ugu danbeeyay, waxaana jira dad badan oo gawaariada iibsanaya.
Ganacsatada Baabuurta ayaa arintaan ku macneeyay in ay magaalada ku soo laabteen dad badan oo naftooda kala cararay wadanka xiligii ay dagaalada ay jireen, iyo sidoo kale in ay haatan magaaalada Yimaadeen dad badan oo aqoonyahano ah kuwaasi oo ku soo laabtay wadanka.
Wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa inta badan waxay yihiin kuwo mashquul ah, gawaarida wadooyinka maraya oo aad u badan.
Ganacsiga Muqdisho iyo Kaalinta Qurba joogta.
Ganacsiga magaalada Muqdisho ee xiligaan isi sii badalaya ayaa waxaa la dhihi karaa waxaa kaalin weyn ku leh dadka wadanka ku soo laabtay.
“Dadkaan ayaga oo wata fikiro cusub oo ganacsi ayay yimaadeen wadanka, waxaana ay sameeyeen isbadal wayn oo ganacsi,”sidaasi waxaa yiri Maxamed Cali oo ka mid ah dadka wadanka ku soo laabtay.
Dowlada Soomaaliya ayaa iyana sheegtay in ay dhiira galinayso ganacsiga Soomaaliya, iyo waliba ganacsatada, waxaana dowlada ay meesha ka saartay lacagihii aanan sharciga ahayn ee laga qaadi jiray Ganacsatada Muqdisho.